ရင်ခုန်ရဆုံး First Date မှာ ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေ ဝတ်ဆင်ရမလဲ? - Shop
ရင်ခုန်ရဆုံး First Date မှာ ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေ ဝတ်ဆင်ရမလဲ?0507
မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အလှအပကို ဂရုစိုက်ပြီး အဝတ်အစားဖက်ရှင်တွေကို ဂရုစိုက်ကြတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သဘာဝပါ … ဒီနေ့မှာတော့ ပျိုမေတို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားသူနဲ့ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမှုမှာ ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေကို ဝတ်ဆင်ရပြီး ဘယ်လိုဖက်ရှင်နဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားမယ်နော် …. 🤩
ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ … ဒီတော့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုမှာ ကိုယ့်ရဲ့လှပမှုတွေ ပေါ်လွင်လာအောင် ဖက်ရှင်ကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် … 😍
ယနေ့ထက်တိုင် သိပ္ပံပညာရှင်များ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အချက်က ပျိုမေတို့အတွက် အဓိကပြသနာက ဗီရိုထဲမှာ အဝတ်အစားပေါများနေသော်လည်း ဝတ်စရာအင်္ကျီရှာမတွေ့ခြင်းပါပဲ …ဒီတော့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းမှာ ဘယ်လိုအဝတ်အစားမျိုးက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးစေမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … 💁‍♀️
(၁) လိုက်ဖက်သော အရောင်နဲ့ ဖက်ရှင်👗
ဖက်ရှင်ကျမှုဆိုတာ အရောင်ရွေးချယ်မှုကလည်း အရေးပါတယ်နော် … အရောင်ရွေးချယ်ရာမှာ သူငယ်ချင်းတွေက မိမိကို အမြဲလိုက်ဖက်တယ်ဟုချီးမွမ်းတဲ့အရောင် ဒါမှမဟုတ် မိမိနှင့်လိုက်ဖက်တယ်ထင်တဲ့ အရောင်ကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ ..
(၂) အသားအရေပေါ်သော အဝတ်အစားများကို ရှောင်ရှားရန်🙅‍♀️
ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုမှာ မိမိရဲ့ အသားအရေကို မပေါ်လွင်သော ဖက်ရှင်များကို အဓိက ဝတ်ဆင်ပါ…အလွန်အမင်း ခေတ်မှီဝတ်စားဆင်ယင်မှုများနဲ့ မိတ်ကပ်အလှကုန်များ အလွန်အမင်းလိမ်းခြယ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ … သဘာဝဆန်ဆန် ဝတ်ဆင်မှုသည် ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ….
(၃) အတိုများကို ရွေးချယ်မိပါက 🙋‍♀️
အတိုများကို ရွေးချယ်မိပါက သင့်ကို စိတ်မကျဉ်းကြပ်စေဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေတဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ … စိတ်ကျဉ်းကြပ်စေတဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးကို ဝတ်ဆင်ပါက တွေ့ဆုံတဲ့အခါ သင့်ကိုသက်သောင့်သက်သာမဖြစ်စေဘဲ စကားပြောတဲ့အချိန်တွေမှာပါ သင့်ကိုခက်ခဲစေမှာပါ… ဒါ့ကြောင့် အတိုများကို ဝတ်ဆင်ပါကလည်း သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ပေါ့ပါးသော အတိုများကိုသာ ရွေးချယ်စေပါတယ် …
(၄) ကော်ဖီဆိုင်ကို ရွေးချယ်ပါက 👗
ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုက ကော်ဖီဆိုင်ကိုသာ ရွေးချယ်မိပါက ပုံမှန်အားဖြင့် ဂျင်း၊ ဂါဝန် နှင့် တီရှပ်များကို ဝတ်ဆင်မှုက အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည် … ဂျင်းနှင့်တီရှပ်များထက် ပိုမိုဝတ်ဆင်ချင်ပါက bomber ဒါမှမဟုတ် ဂျင်းဂျက်ကတ်ကိုအပေါ်ထပ်အဖြစ် ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ် …. ဂါဝန်များကို ရွေးချယ်ပါကလည်း ပန်းပွင့်ပါသောဂါဝန်က သင့်ကိုနုပျိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေမှာပါ …
(၅) စားသောက်ဆိုင်တွင် ဒိတ်လုပ်ခဲ့ပါက🙋🏽
သင့်ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက စားသောက်ဆိုင်တွင် ညစာစားသောက်ဆိုင်မို့အတွက် ချိန်းဆိုခဲ့ပါက ဂန္တဝင်ဆန်တဲ့ အလှမျိုးတွေနဲ့ လှပစေတဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ် … ရိုးစင်းပြီး စမတ်ကျစေတဲ့ဂါဝန်မျိုး ဒါမှမဟုတ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်နော် …
(၆) အိတ်နှင့် ဖိနပ်များ👛👠
ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဝတ်ဆင်ပါက သင့်ရဲ့ အိတ်လေးကိုတော့ အလယ်အလတ်ဆိုဒ်နဲ့ ဖိနပ်ကိုတော့ Flat-Shoe လေး ဒါမှမဟုတ် Sneaker လေးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်နော် … ဂါဝန်လေးကို ရွေးချယ်ပါက အိတ်အသေးနှင့် Flat-Shoe ဒါမှမဟုတ် ဒေါက်ဖိနပ်လေးကို ရွေးချယ်မို့နိုင်ပါတယ်နော် …
အမျိုးသမီးဖက်ရှင်များ ဝယ်ယူရန်လင့်ခ် > > > http://tiny.cc/hr06kz
Previous Articleရုပ်ထွက်လည်းလန်း အသံစနစ်လည်းမိုက်တဲ့ ၃သိန်းအောက် TV တွေကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Shop.com.mm မှာရှိနေပြီနော်။Next Articleသင်္ကြန်တွင်းမှာ သင့်ရဲ့ အစီအစဉ်လေးက….
Instagrammers ေတြ အၾကိဳက္ ေက်ာပိုးအိတ္ ေလးေတြ